भि’डिओ मि’टिङमा व्य’स्त र’हेका बेला यी व्य’क्तिलाई महिलाले चु’म्बन ग’र्न खोजेपछि…. भिडियो – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारभि’डिओ मि’टिङमा व्य’स्त र’हेका बेला यी व्य’क्तिलाई महिलाले चु’म्बन ग’र्न खोजेपछि…. भिडियो
भि’डिओ मि’टिङमा व्य’स्त र’हेका बेला यी व्य’क्तिलाई महिलाले चु’म्बन ग’र्न खोजेपछि…. भिडियो
काठमाडौं-कोरोना भा’इरस को’भिड–१९ को म’हामारीका कारण विश्वभर भि’डिओ वैठक लो’कप्रिय बनेको छ। म’हामारीले घ’रमै बसेर काम गर्ने वि’कल्प दि’एपछि मानिसहरु विभिन्न भि’डिओ ए’पमार्फत् यस्ता वै’ठकमा स’हभागी हुन्छन्। मानिसहरु घ’रमै भि’डिओमार्फत् अ’फिसका वैठक, सभा, स’म्मेलनमा स’मावेश हुन्छन्। यसका साथै भि’डिओ वै’ठक य’तिबेला एक देशदेखि अर्को दे’शबीचका ने’ताबीच पनि संचारको माध्यम ब’नेको छ।
यस क्रममा भारतमा भि’डिओ वै’ठकबारे नै एउटा भि’डियो भाइरल बनेको छ। जि’न्युजका अनुसार भि’डिओ वैठकमा बो’लिरहेका एक व्यक्तिलाई उनकी श्री’मतीले चु’म्बन ग’र्न खो’जेको भि’डिओ भा’इरल बनेको हो। भि’डिओमा दे’खिएअनुसार ती व्यक्ति भि’डिओ वै’ठकमा व्य’स्त हुन्छन्। के’हीबेरमै उनकी श्रीमती त्यहाँ आ’इपुग्छिन् र उनलाई चु’म्बन गर्न खो’ज्छिन्। चु’म्बन ग’र्न खो’ज्दा ती व्यक्ति पर स’रेको दे’खिएको छ र क्या’मेरा अन भएको ब’ताएपछि महिला ल’जाएको दे’खिएको छ।
हा’ल मानिसहरुले वि’भिन्न प्र’तिक्रिया जनाइरहेका छन्। घरबाटै काम ग’र्दा अथवा भि’डिओ वै’ठकमा स’मावेश हुँदा यस्ता कि’सिमका स’मस्या सा’मान्य भएको मानिसहरुले बताइरहेका छन् भने केहीले महिलाको प्र’शंसा ग’र्दै ती महिला श्रीमानलाई माया ग’र्ने व्य’क्ति भएको बताएका छन्। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस